Homeसमाचारकुन हैसियतले पुगिन् चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपतिकी छोरी प्लेनसम्म ?
October 14, 2019 Spnews समाचार Comments Off on कुन हैसियतले पुगिन् चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपतिकी छोरी प्लेनसम्म ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरी गएकोप्रति पोर्टफोलियो चासो बढेको छ । शनिबार अपरान्ह सी काठमाडौं ओर्लदा राष्ट्रपति भण्डारीसंगै उनकी छोरी पनि प्लेनसम्मै पुगेकी थिइन् । उनी कुन हैसियतमा पुगेकी थिइन् भनेर प्रोटोकलमा राख्ने जानकारहरु अचम्ममा परेका छन् । राष्ट्रपतिकै छोरीको हैसियतमा उनी राष्ट्रपति भण्डारीसंग जान मिल्दैन । तर विमानस्थलमै उनी जानुलाई भने प्रोटोकल जानकारहरु निको मान्दैनन् ।
जबकि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतसमेत सीलाई स्वागत गर्न भीभीआईपी लबिमा बसेका थिए । यो सन्दर्भमा राष्ट्रपतिकी छोरी के हैसियतले अगाडि पुगिन् भन्ने कुरा धेरेको आश्चर्यको विषय भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शनिबार सीलाई स्वागत गर्न केही समय ढिला गरी पुगिन् । उनी प्लेनको भर्याङमै पुगेर सीलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम थियो । तर भण्डारी प्लेननिर पुग्न नै ढिला गरेपछि सी बाहिर आउन सकेनन् । प्लेन ल्याण्ड भइसकेपछि पहिले हेड अफ द डेलिगेट्स पहिले आइपुग्छन् बाहिर । तर शनिबार त्यस्तो देखिएन ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भर्याङको तल नै रोकिन भण्डारीलाई आग्रह गरिरेहका थिए । नेपाल टेलिभिजनमा यो दृष्य प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहँदा प्रस्तोताले पनि राष्ट्रपति भण्डारी प्लेनभित्रै गएर सीलाई स्वागत गर्ने बताइरहेकी थिइन् । पहिलो कुरा त स्वागत गर्ने मानिस पुग्न नै ढिला गर्ने त्यसपछि स्वागत गर्ने क्रममा छोरी लैजानु र हडबडमा गडबड गर्न खोज्नुले गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले किन त्यसरी तालमेल मिलाउन सकिनन् भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघि पनि गल्तीहरु गर्दै आइरहेको छ । यसपटक पनि कार्यालयबाटै भएको गल्तीले गर्दा कतै भण्डारी आलोचित बनेकी त हैनिन् ? या उनलाई यसबारेमा जानकारी नै छैन ? छोरीसमेत लगेर प्रोटोकल तोडेको विषयलाई समेत जोडेर शनिबारको राष्ट्रपतिको कदमलाई गम्भीर रुपमा लिइएको बुझिन्छ । हाम्रा कुरा डटकमबाट साभार ।